Ny Genius Bars ao amin'ny Apple Store dia manohy manangona fahombiazana | Avy amin'ny mac aho
Androany dia tsy maintsy manome vaovao anao izahay izay tena hanaiky tanteraka ianao ary izany dia izao indray, ny hevitra tsara nananan'i Steve Jobs momba ny famoronana toerana ao anaty magazay izay hanampy anao ireo teknisianina manam-pahaizana hamaha ny fisalasalana rehetra amin'ny asan'ny fitaovana sy fitaovana, antso Bar Genius, nomena indray izy ireo araka ny fanadihadiana nataon'ny Consumer Reports.
Rehefa avy nanadinadina mpampiasa mihoatra ny 3.200 nandalo ny serivisy Genius Bar tao amin'ny Apple Store izy ireo dia afaka nanatsoaka hevitra fa serivisy manaitra izany ary maherin'ny 90% amin'ireo mpampiasa mampiasa azy no mahatalanjona momba azy.
Mazava fa misy tranga manokana foana, izay, raha ny hevitry ny mpampiasa, dia tsy voavaha ny olana iray, na dia i Apple aza dia manandrana mamaha ny fangatahana rehetra amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa. Genius Bar dia vita.
Ny Genius Bars dia matetika hita eo amin'ny farany ambany amin'ny Apple Store, na dia misy aza ny sasany any izay noho ny fikirakirana anatiny dia misy toerana hafa. Ireo teknisianina manam-pahaizana voaofana manokana momba an'io an'ny Apple dia manome fanohanana an'ireo bara ireo.
Raha te-hampiasa an'ity serivisy ity dia mila mangataka fotoana amin'ny alàlan'ny tranokala Apple ianao satria nanjary malaza izy ireo ka amin'ny ankamaroan'ny tranga dia feno mpampiasa te hianatra bebe kokoa momba ny fitaovany izy ireo.
Fanohanana ara-teknika maimaim-poana mandritra ny 90 andro amin'ny fividianana vokatra dia manarona ny fitaovana sy ny rindrambaiko ary manitatra ny fanampiana azon'ny Genius Bar omena ny tranonao. HO AN'NY paoma fitaovana Izy io koa dia manome fanampiana an-tariby ho an'ny fizotry ny fananganana, fametrahana, fametrahana ary ny fifandraisana ifotony. Fanohanana ara-teknika maimaimpoana ho an'ny rindrambaiko manome fanohanana an-tariby amin'ny fametrahana, fampandehanana na fametrahana indray ny rindrambaiko (tsy ao anatin'izany ny fanarenana data) raha toa ka mahafeno ny fepetra takiana farany amin'ny rindranasa ho an'ny rindrambaiko ny fikirakiranao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Store » Ny Genius Bars ao amin'ny Apple Store dia manohy manangona fahombiazana
Ny datin'ny WWDC 2015, ny beta an'ny OS X 10.10.4 ary ny veloma ny Discoverd, ny fanatsarana ny fiarovana ny OS X 11 sy ny iOS 9 ary maro hafa ao amin'ny Best of the week amin'ny SoydeMac